Tag: saadaalinta | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 6, 2014 Khamiista, Febraayo 6, 2014 Douglas Karr
Maalmo kasta, aniga iyo gabadhayda waxaan isku khilaafnaa cidda leh xadhigga lacag-bixinta. Waan jeclahay xadhiggayga waxayna u egtahay inay kaga tagto xadhigeeda gaadhigeeda. Haddii taleefannadeennu labaduba ay ka hooseeyaan boqolkiiba hal lacag oo keliya… iska ilaali! Taleefoonnadeennu waxay ka mid noqdeen qofkeenna. Waa nudaha isku xidhka ah ee saaxiibadeena, duubista xusuusta aan hadda leenahay, saaxiibkeen oo ina xusuusinaya waxa xiga ee la samaynayo, iyo xitaa
Sannadkan ma kuu nuugay? Way ii qabatay. Waxay ahayd sanad dhib badan sidii aan u waayey aabbahay, caafimaadkayguna u liito, ganacsiguna uu lahaa xoogaa liita oo xun - oo ay ka mid tahay kala tegis saaxiib weyn iyo jaal. Dadyohow waxaad u aqrisaneysaan boggeyga macluumaadka suuq geynta sidaa darteed ma doonayo inaan diiradda saaro arrimaha kale (in kasta oo ay saameyn weyn yeesheen), waxaan rabaa inaan si toos ah ula hadlo Suuqgeynta iyo Teknolojiyada Suuqgeynta. Suuqgeynta 2013
Waxaa nagu buuxsamay macluumaadka ka socda baraha bulshada, raadinta iyo sanduuqayaga. Qiyaasta ayaa sii kordheysa. Wax aan ka yarayn 100 sharci oo ku jira sanduuqa sanduuqa si aan ugu gudbiyo farriimaha iyo digniinta si habboon. Jadwalkayga ayaa iswaafajiya inta udhaxeysa Blackberry, iCal, Google Calendar iyo Tungle. Waxaan hayaa Google Voice si aan u maareeyo wicitaanada ganacsiga, iyo YouMail si aan u maareeyo wicitaanada tooska ah ee taleefankayga. Joe Hall wuxuu maanta qoray in walwalka asturnaanta iyo adeegsiga macluumaadka shaqsiyeed ee Google ay awood u leedahay